Offshore Trust - အကျိုးခံစားခွင့်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ခြင်း၊ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း
အတော်များများကပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကျွမ်းကျင်သူများကသဘောတူသည် ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှု စနစ်တကျရွေးချယ်ထားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၌တည်ရှိ၏ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အင်အားအကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမော်တော်ယာဉ်။ အဆိုပါ ကွတ်ကျွန်းစု ယုံကြည်မှုသည်အင်အားအကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာဥပဒေရာဇ ၀ င်ကိုပြသခဲ့သည်။ ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အကောင်းဆုံးတရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဘို့။ ဒေသခံတရားရုံးကငွေပေးချေမှုကိုတောင်းဆိုတယ်ဆိုပါစို့။ သင်၏ဒေသခံတရားရုံး၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိသောကွတ်ကျွန်းစုရှိယုံကြည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန်ဥပဒေကုမ္ပဏီဖြစ်သောဂေါပကသည်တရားရုံးအမိန့်ကိုလိုက်နာရန်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့် လိုင်စင်ရကပ်လျက်တည်ရှိ, အာမခံထား အသက် 30+ နှစ် ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီ သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအန္တရာယ်ရဲ့လမ်းထဲကစောင့်ရှောက်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏စိတ်ငြိမ်သက်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်သည် ယုံကြည်မှုအားဖြင့် ၁၀၀% ပိုင်ဆိုင်သောကမ်းလွန်ကန့်သတ်ထားသောတာ ၀ န်ယူမှုကုမ္ပဏီ (LLC)။ အဆိုပါ client ကိုအဆိုပါ LLC ၏မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ အကောင့်များကိုအလွန်လုံခြုံသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်တစ်ခုတွင် LLC တွင်ထားရှိသည်။ ဖောက်သည်သည်ဘဏ်အကောင့်အားလုံးတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးသူဖြစ်သည်။ "မကောင်းတဲ့အရာ" ဖြစ်ပျက်နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတရားရုံးများကသိမ်းယူနိုင်သည့်အခါ။ ဒါကြောင့်ဂေါပက LLC ၏မန်နေဂျာအဖြစ်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီကိုသင်ပေးဆပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းလုပ်သည်။ တရားဝင်ခြိမ်းခြောက်မှုဖြတ်သန်းသွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုနဂိုအတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်သော LLC ၏မန်နေဂျာအဖြစ်ဖောက်သည်ကိုပြန်လည်ထားရှိမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနအနေဖြင့်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသောကွတ်ကျွန်းစုယုံကြည်မှုသည်ဖောက်သည်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတရား ၀ င်စိန်ခေါ်မှုတိုင်းမှအကာအကွယ်ပေးခဲ့သည်ကိုပြသခဲ့သည်။
An ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုသည်ရိုးရာယုံကြည်မှုနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတွင်အောက်ပါပါတီများအကြားဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်အစီအစဉ်ပါဝင်သည် -“ Trustee (s),”“ Settlor (s)” နှင့်“ အကျိုးခံစားသူ (များ)” ။ ပြisions္ဌာန်းချက်များကိုစာဖြင့်ရေးသားထားသောတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းကို“ ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာလုပ်ရပ်” ဟုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်သည်။ ဤတရားဝင်ကိရိယာသည်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုယုံကြည်မှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းစီမံနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်လူတစ် ဦး (သို့) လူတစ်စုအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဖြန့်ဝေမှုများကိုဆက်တိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ယုံကြည်မှုကိုဤလူများကိုအကျိုးခံစားခွင့်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဒီမှာခြားနားချက်ပါ။ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတရားသူကြီးတစ် ဦး မှရန်ပုံငွေများလွှဲပြောင်းပေးရန်တောင်းဆိုသည်ဆိုပါစို့။ ကံကောင်းထောက်မစွာပဲ၊ သင့်အတွက်၊ နိုင်ငံခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိဂေါပက (ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန်ဥပဒေရုံး) ကိုလိုက်နာရန်မလိုပါ။
ဂေါပကနှင့် / သို့မဟုတ်ယုံကြည်မှုကုမ္ပဏီ၏ယုံကြည်မှု၏စီမံခန့်ခွဲမှုမှတရားစွဲဆို။ ၎င်းတို့သည်သဘောတူညီချက်အားထိန်းသိမ်းရန်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသောတာ ၀ န်ဖြင့်ချည်နှောင်ထားသည်။ စာရွက်စာတမ်းကိုလက်မှတ်ထိုးခြင်းအားဖြင့်သူတို့သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည်။ ယုံကြည်မှုသည်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်မတူပါ။ ဤယုံကြည်မှုအမျိုးအစားသည်ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာဂေါပကဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်ပါတယ် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသားကောင်များမှကာကွယ်ရန်.
Offshore Asset Protection Trust ဖွဲ့စည်းရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်း
ပထမ ဦး စွာ settlor ယုံကြည်မှုဖွဲ့စည်းရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ ထို့နောက် settlor ထို့နောက်သူဖွဲ့စည်းရန်ဆန္ဒရှိအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ယင်း၏ကြာရှည်မှုပါဝင်သည်။ အသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ settlor သည် (ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီဖြင့်) လည်းအရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်များချလိမ့်မည်။ ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များတွင်ယုံကြည်မှုကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့တွင်ယုံကြည်မှုသည်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိမရှိ၊ မပါဝင်သည်တို့ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ဂေါပကအဖွဲ့၏ရပိုင်ခွင့်များ၊ တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများ၊
အခုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလို့မရတဲ့၊ သူတို့၏အမည်များဖော်ပြသကဲ့သို့, ပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်သောယုံကြည်မှုကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောသက်တမ်းရှိနိုင်သည် (သို့မဟုတ်အကန့်အသတ်မရှိကြာရှည်နိုင်သည်) ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းအတွက်ပြဌာန်းချက်မရှိပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွင်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း၎င်း၏ဖန်တီးမှုစည်းကမ်းချက်များပေါ် မူတည်၍ နိဂုံးချုပ်နိုင်သည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာယုံကြည်မှုသည်မည်သည့်အမျိုးအစားတွင်မဆိုသက်ရောက်နိုင်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသူအားဝေငှသူများအားဖြန့်ဝေခြင်းကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်သည်နှင့်အချို့သောအခြေအနေများတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောခန့်အပ်ထားသူကိုတောင်မှပေးအပ်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အကျိုးခံစားခွင့်များထည့်ပါ။ ၎င်းသည်လုပ်ပိုင်ခွင့်များစွာကိုလျှော့ချလိုက်သည် ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှု ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၏စည်းကမ်းချက်များကိုအောင်မြင်စွာနှင့်သစ္စာရှိစွာဖြည့်ဆည်းပြီးလေးစားရန်လိုအပ်သည့်အတွေ့အကြုံနှင့်အရည်အချင်းပြည့်ဝသော၊ နာမည်ကောင်းရှိသည့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသို့မဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ခြင်း၏အရေးပါမှုကိုဂေါပကတစ် ဦး အားအလေးထားသည်။ ။
Offshore Trust ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာနေရာချထားခြင်းသည်ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှု၏အကျိုးအမြတ်ခံစားခွင့်များမှလျှို့ဝှက်ချက်နှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၏ခြင်္သေ့ဝေစုကိုသိမ်းဆည်းထားသောနေရာဖြစ်သည်။ ဥပဒေရေးရာခေါင်းစဉ်ယုံကြည်စိတ်ချအတွက်ထွက်သတ်မှတ်ထားသောတာဝန်ဝတ္တရားဖြည့်ဆည်းရမယ်သောဂေါပကမှဖြတ်သန်းနေစဉ်။ ယုံကြည်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစာရင်းအရပါ ၀ င်နိုင်သူဖြစ်ပြီးမကြာခဏပါ ၀ င်သောအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်။ ဤအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများသည်ယုံကြည်မှုရှိအကျိုးစီးပွားများနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ခိုင်မာသောအခွင့်အရေးများရှိပြီးတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့အများစုကယင်းကိုအသိအမှတ်ပြုကြသည် ရည်ရွယ်ချက်မှာအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအကျိုးခံစားခွင့်များကိုပေးရန်ဖြစ်သည် နှင့် သူတို့ရဲ့ ဦး တည်ချက်အတွက်လိုလိုလားလားအုပ်ချုပ် အခါယုံကြည်မှု၏စီမံခန့်ခွဲမှုအဖြစ်မေးခွန်းများကိုပေါ်ထွန်း။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုများကိုအခွန်အကောက် (သို့) ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးတရားစီရင်မှုများတွင်အမြဲတွေ့ရလေ့ရှိသည် ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ခြင်းအတွက်ဂုဏ်သတင်း, ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုသည်ဤအင်္ဂါရပ်များမှအကျိုးကျေးဇူးများလည်းရရှိနိုင်သည်။ ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုအတွင်းစီမံခန့်ခွဲသောပိုင်ဆိုင်မှုများမှာအများဆုံးဖြစ်သည် တခါတရံကျဉ်းကျပ်နေသောတရားဝင်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများမှကင်းလွတ်သည် တစ် ဦး settlor ရဲ့ဇာတိနိုင်ငံသို့မဟုတ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်သက်ဆိုင်ပါသည်။ ယုံကြည်မှုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သူနှင့် / သို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ဖက်များ၊ ကလေးများသို့မဟုတ်အခြားအခြေချနေထိုင်သူများ၏အမွေဆက်ခံသူများ၏အကျိုးအတွက်စီစဉ်ရန်ယုံကြည်မှုဖြစ်ပေါ်လာလျှင်ဥပမာအားဖြင့်၊ ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှု ပြင်းထန်သောအမွေဥစ္စာစိစစ်ထံမှဆိပ်ပေးလိမ့်မည်။ အမေရိကန်ပြည်သူများအတွက်ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာယုံကြည်မှုသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အခွန်စည်းကြပ်မှုဖြစ်သည်။ ဤသည်ကသင့်ရဲ့အခွန်တိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျှော့ချမထားဘူး။
ထို့အပြင်၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်လုံခြုံသောနေရာများတွင်၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုများကကမ်းလှမ်းသည် မတူနိုင်သည့်လျှို့ဝှက်ချက်များ၊ တရားရေးနှင့်တာ ၀ န်ခံမှုအန္တရာယ်များမှကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကွာရှင်းခြင်းသို့မဟုတ်စီးပွားရေးဖျက်သိမ်းခြင်းကဲ့သို့သောအရာများမှကာကွယ်မှုပိုမိုရရှိခြင်း။ နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးမငြိမ်မသက်မှုများကြုံတွေ့ရလျှင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ရန်လူအများက၎င်းတို့ကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ ပြင်းထန်သောရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သည့်စွပ်စွဲချက်အခြေအနေများ မှလွဲ၍ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုနှင့်ဆိုင်သောလျှို့ဝှက်ချက်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်အလွန်ခက်ခဲသည်။ အများဆုံးတရားစီရင်မှု၌တည်၏။
Offshore Trust ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ဖွဲ့စည်းရမည်နည်း
ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်ယုံကြည်မှုရန်ပုံငွေများကိုအောင်မြင်စွာစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်စီရင်ခြင်းတို့အတွက်အောင်မြင်သောဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုများကိုအခွန်နည်းပါးသောသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုလုံခြုံသည့်နေရာများတွင်တည်ဆောက်လေ့ရှိသည်။ သို့ရာတွင်သင့်တော်သောနေရာတစ်ခုကိုအခွန်အကောက်ဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိရန်လုံးဝမလိုအပ်ပါ။ အောင်မြင်သောယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာတရားစီရင်မှုနှင့်နိုင်ငံများစွာသည်ကျော်ကြားပြီး၊ အတွေ့အကြုံရှိယုံကြည်မှုရှိသောကုမ္ပဏီများသည်ထူးကဲသောလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်သိသိသာသာပိုင်ဆိုင်မှုဒိုင်းများဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည်။
ဘုံပိုင်းခြေတစ်ခုမှာဤတရားစီရင်မှုများသည်၎င်းတို့၏ယုံကြည်မှုစည်းမျဉ်းများနှင့်ပြဌာန်းချက်များကိုအင်္ဂလိပ်ဘုံဥပဒေအပေါ်အခြေခံသည်။ ဤသည်ယုံကြည်မှုဖွဲ့စည်းခြင်း၏စိတ်ကူးသည်ခရူးဆိတ်စစ်ခေတ်မှအင်္ဂလိပ်ခေတ်အယူအဆဖြစ်သည်။ လူဇင်ဘတ်၊ မော်လ်တာ၊ ဆွစ်ဇာလန်စသည့်အောင်မြင်သောယုံကြည်မှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုပေးသောအခြားဥရောပတရားစီရင်မှုများသည်၎င်းတို့၏စည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုအင်္ဂလိပ်ဘုံဥပဒေပေါ် အခြေခံ၍ ချမှတ်ထားသည့်သင့်လျော်သောယုံကြည်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံများနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်သောအရာများထက်ကျော်လွန်သောတရားစီရင်မှုများသည်ကွတ်ခ်ကျွန်းစုများဖြစ်သည် နီဗစ်ယုံကြည်မှု နှင့်နိုင်ရန်အတွက်ဘေလီဇ်အတွက်တ။
ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအခြေချနေထိုင်သူ၏ရည်မှန်းချက်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုလက်တွေ့ကျကျအကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းကိုတည်ထောင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွင်အရင်းအမြစ်အချို့ကိုလုယူလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်လေးနက်သော, ကျူးလွန်သုတေသနနှင့် အတွေ့အကြုံရှိပြီးဗဟုသုတရှိသောအေးဂျင့်များ၏အကြံဥာဏ်နှင့်အကူအညီသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်.
ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမရေရာစွာစစ်ဆေးခြင်း၊ တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့်ပြည်တွင်းပstrိပက္ခများမှသိသိသာသာအကာအကွယ်ပေးသည်။ ဒါဟာဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏ကုန်ကျစရိတ်စဉ်းစားစေခြင်းငှါနေစဉ်တစ် ဦး ၏တည်ထောင်ခြင်းသိသာဖြစ်သင့်သည် ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုသည်၎င်းတို့၏အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်ရေရှည်တွင်ကလေးများအားထောက်ပံ့ရန်ရှာဖွေနေသူများအတွက်စိတ်ငြိမ်သက်မှုရှိစေသည်.